कसैले आफुलाई कति माया गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने संकेतहरु ? « Pariwartan Khabar
कसैले आफुलाई कति माया गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने संकेतहरु ?
13 February, 2018 10:07 am
सहयोग गर्न तत्पर
जब कसैले चाहन्छ, मन जित्ने अनेक उपायहरु खोजिरहन्छ । सानोतिनो कुरामा पनि सहयोग गर्न अग्रसर हुन्छ । उनीहरुले यो देखाउन चाहन्छ कि तपाईको लागि उसलाई कति चिन्ता छ ।
हँसाउने प्रयास गर्ने
तपाईंको प्रेममा परेको व्यक्ति सँधै तपाईंको ओठमा हाँसो देख्न चाहन्छ । उसको कुरामा तपाईं हाँसिदिनुभयो भने उसलाई त्योभन्दा ठूलो खुशी अर्को केही हुँदैन । कहिलेकाहीँ तपाईंलाई हँसाउने चक्करमा फाल्तु जोक वा बेअर्थी कुरा पनि बोलिदिन सक्छ । तर, यस्ता कुरामा पनि तपाईं मुस्कुराईदिनुभयो भने उनी मख्ख पर्छ ।
तपाईंको रुची नै उसको रुची
तपाईंसँग प्रेममा परेपछि उसका रुचीहरु बदलिन्छन् । अब तपाइंको रुचीलाई नै उसले आफ्नो रुची सम्भिmन्छ । तपाईंलाई मन पर्ने गीत, फिल्म, किताब अब उसलाई पनि मन पर्न थाल्छन् ।
जसलाई हामी मन पराउँछ, उनी पनि आफ्नो नजिक हुन खोज्छ भने यसलाई गि्रन सिग्नलको रुपमा बुझे हुन्छ । जब कसैसँग भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जान्छ, शारीरिक रुपमा पनि नजिकिन खोजिन्छ । उनकै आसपासमा बस्न खोजिन्छ ।
उसकै सामिप्यता खोजिन्छ । यसका लागि बहाना अनेक हुनसक्छ । कुनै न कुनै रुपमा कोहि आफ्नो निकट रहने प्रयास गर्छ भने उसले आफुलाई माया गरिरहेको छ भनेर बुझे हुन्छ ।
सम्पर्कमा रहन खोज्ने
जब कसैले आफुलाई पनि मन पराउँछ भने, उनी हरक्षण सम्पर्कमा रहन खोज्छन् । कुनै न कुनै बहाना गरेर बोल्न चाहन्छन् । अहिले त मोवाइल फोन, फेसबुक जस्ता माध्यामहरु छन्, जसले सम्पर्क स्थापित गर्न सहज बनाइदिएको छ । यदि कसैले आफ्नो बारेमा निजी चासो राख्छ, दुखसुख सेयर गर्छ, सामान्य कुरामा पनि बातचित गर्न खोज्छ भने, बुझौं उनको मनमा आफ्नो प्रेम अंकुराउन थालेको छ ।
नेताहरुप्रति आक्रोश पोख्दै निश्चलले भने– ‘राम्रो रोज्ने मौका त हामीले गुमायौँ, अब ढिला नगरी कुहिएकालाई चै फ्याक्नुपर्छ’
म्यूजिक भिडियोमा डेब्यु गर्दै अञ्जु पन्तकी छोरी परितोसिका
उपत्यकाका १ हजार ७०२ सहित थप ३ हजार ९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि